IINGCAMANGO ZOKUHLOLA (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGQIBELA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iingcamango zokuHlola (isiKhokelo soYilo lokugqibela)
Iingcamango zokuHlola (isiKhokelo soYilo lokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela malunga nemibono ye-wainscoting kubandakanya indleko, ukufakelwa kunye neentlobo ezithandwayo kuyilo lwakho lwangaphakathi.
Ukucoca ucoceko luhlobo lodonga olwenziwe ngabanini bamakhaya, abayili bangaphakathi, kunye nabayili bezakhiwo abalusebenzise kangangeenkulungwane. Xa isiza kuwo, nangona kunjalo, ukuntywila kwisongelo ayisiyonto ilinganayo. Zininzi izinto ezikuvumela ukuba wenze ubuwena ngokobuqu kukhetho lwakho, uyilo lwasekhaya, kunye noyilo lwegumbi elithile. Oku kunokubonakala kunzima ekuqaleni xa ucinga ngokurhola amakhaya ekhayeni lakho. Ukukunceda uphume, siza kuqhekeza ukuba yeyiphi na i-wainscoting kwaye zeziphi iindlela zoyilo ezinokusebenzela wena.
Iindleko zokufaka iWatchcoting
UkuTsalwa kweWood Wood
Ukuxhonywa kweWall Wall
Ukuphakanyiswa kwePaneli yokuHlola
Ukuvavanywa kwePaneli eFlatini
Ukuvavanywa kwePaneli evalelweyo
Uvavanyo lweBadboard lweWatchboard
IBhodi kunye neBatten Wotingcoting
Usihlalo woLoliwe oGqwesileyo
Isakhelo somfanekiso Wcciso
UkuBanjwa kweToni ezimbini
Uyilo lweMifanekiso eqingqiweyo
Ukuvulwa kweVenkile yokuGcina yangasese
Igumbi lokuGcina ukuGcinwa kwamagumbi
Igumbi lokuhlala lokuVota
Indawo yokuHlaba yeWainscoting
Uvoto lwale mihla
Ugcino lweWarn Wood
Uboniso lweArt Deco
Uvavanyo lweWales lwangaphandle
UkuGqotshwa koDonga ngokuGcweleyo
Ukutsala ixesha elide
Uvavanyo lweW DIY
Iikiti zokuHlola iWains
Uyifaka njani i-Wainscoting
Ukupeyinta ukuGcinwa kwaManzi
Ukuvavanywa kwe-Wainscoting ligama eliyilo lonke eliquka konke. Ngokubanzi, ibhekisa kwipaneli egubungela isiqingatha esisezantsi sodonga. Ingasetyenziselwa uyilo lwe-aksenti okanye ngakumbi iinjongo zokwakha njengokugubungela okanye ukuthintela umonakalo okanye nokongeza ubushushu kwigumbi.
Ukuqotywa kwamanzi kukwabizwa ngokuba yiWainscot kwaye kuhlala kusenziwa ngomthi wom-oki. Imvelaphi yeligama elithi wainscoting kucingelwa ukuba livela kwigama lesiDatshi elithi 'wains' elalithetha inqwelo. Olu hlobo lweepaneli lwalusetyenziswa kakhulu kulwakhiwo lweenqwelo kunye nomsebenzi wokuqeqesha.
Kukho imigaqo embalwa yokwazi xa kuziwa ekuxoxeni nge-wainscotting. Amacandelo amabini aphambili alo mxholo yiphaneli kunye nesakhelo sepaneli. Iphaneli ngokwayo inamalungu amane; Umgaqo kaloliwe ongaphezulu, uloliwe osezantsi, kunye neeseyile ezisecaleni. Iileyili ezisecaleni zihlala zibhekiswa ngokudibeneyo njengezitayile.
Ukuvavanywa kwethambo kungohluka kuyilo kwaye umnini khaya ufuna kodwa, ngenkcazo engqongqo, igubungela ezantsi i-3 ukuya kwi-4 yeenyawo zodonga lwakho. Ngodonga lweenyawo ezisibhozo ubungakanani obuqhelekileyo bokuphonononga kungama-32 kunye nodonga lweenyawo ezisithoba ubungakanani obuqhelekileyo bungu-36 ″. Kwamagumbi aphezulu esilingi kunye neendawo ezinkulu ezinobungakanani ukuya kuthi ga kuma-48 ″ yinto efanelekileyo.
Ewe unganakho ukuwola okude okanye ukogquma udonga lonke. Ngapha koko uyilo olude lwe-wainscoting ngoku luhamba mva nje. Ikwayilo lodonga lwangaphakathi, ke ilingana negumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, ipaseji, okanye ikhitshi kakuhle. Le nkcazo iyahluka kancinane kwi-beadboard eli ligama elihlala lisetyenziswa ngokungafaniyo kunye nokufakwa kwe-wainscoting. Siza kujonga ukungafani kwezi ngcaciso kamva kamva.
Iindleko zokufaka i-wainscoting zixhomekeka kwizinto ezimbalwa. Oku kunokubandakanya izinto, uyilo, ufakelo, umsebenzi, kunye nendawo kunye nobukhulu bodonga okanye iindonga ozifakayo.
Ngokubhekisele kwizixhobo, amaxabiso ayahluka kakhulu. Ezinye unokuzifumana ngokuncinci malunga ne-7 yeedola ngeenyawo zekwere ngelixa ezinye zinokuya kuthi ga kwiidola ezingama-40 okanye ngaphezulu ngenyawo lesikwere. Kuya kuba lula ukwaphula la maxabiso ngokuthe ngqo xa sijonga izinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
Ke, kukho iindleko zokufaka. Ngelixa ukuhanjiswa kweewinscoting kungathathwa njenge-DIY, iindleko zomsebenzi zinokongeza xa ukhetha ukuhamba ngaloo ndlela. Oku kuxhomekeke ekubeni kunzima kangakanani isitayile sokuloba kunye nohlobo ukufakela kunye neendleko zabasebenzi ngeyure. Ngokomndilili, uninzi lweekhontraktha lusebenza malunga ne- $ 90 ngeyure kule projekthi kodwa oku kuyahluka kubani obaqeshileyo. Ke, kuyakufuneka uthathele ingqalelo ukuba iindleko ziphindaphindwe ngexesha lofakelo oluza kuthatha. Ikhontraktha yakho kufuneka ikunike uqikelelo ngaphambi kokuba iqale umsebenzi. Ukuba uthatha oku njenge-DIY, khumbula ukuba kuyakufuneka uthenge izixhobo zokwenza.
Ngethamsanqa, awuyi kuba nexhala kakhulu malunga nokugcinwa. Ngelixa banokufuna uthuli olongezelelekileyo, ukuqaqamba okuphezulu kwenza ukuba ukubethelwa kube lula ukusula- kuhlala kulula kuneendonga ezingenanto. Ngokungafaniyo notyalo mali lokuphucula amakhaya, akunakufane ufune iinkonzo ezinje ngokuthengisa kwakhona. Isepha nje encinci kunye namanzi amaxesha ngamaxesha zihlala zikhohlisa.
Esinye sezigqibo zokuqala oza kuzenza xa kufikwa kwi-wainscoting yinto ofuna ukuyisebenzisa. Ngethamsanqa ukujongwa kwisicatshulwa kuyilo lwento ecekeceke elithetha ukuba inokwenziwa ngenani lezixhobo, ekuvumela ukuba utshatise uyilo lwakho olwahlukileyo kunye noyilo lwangaphakathi.
Iindleko zokucoca ukhuni zinokwahluka okongezelelekileyo ekungabikho zininzi ezinye izinto ezinazo: uhlobo. Njengomgangatho wokhuni, unokukhetha okuninzi okwahlukileyo kubunzima, iinkozo kunye nombala. I-Poplar veneer ixabisa malunga ne-7 ukuya kwi-17 yeenyawo ngeenyawo eziqhelekileyo, i-oki ihamba malunga ne- $ 12 ukuya kwi-30 ngeenyawo zenyawo, i-maple isebenza malunga ne-13 ukuya kwi-35 zama-35 ngeenyawo zenyawo, kunye ne-14 ukuya kwi-40 zama-40 ngeenyawo zenyawo. Oku kwenza ukuba ukhuni lube lolunye lwezinto ezibiza kakhulu phakathi kwezixhobo.
Enye into enokuthi ichaphazele ixabiso lokuhluthwa kweenkuni ukuba uyalela ngaphambili. I-oki efakwe kwi-Factory i malunga ne-19 ukuya kwii-31 zama-31 ngeenyawo zenyawo, i-maple ehleliweyo ukusuka kwi-20 ukuya kwi-37 ngeenyawo zenyawo, kwaye i-cherry enamabala e-cherry iqikelelwa malunga ne-20 ukuya kwi-40 zama-40 okanye ngaphezulu kwenyawo nganye. Ungazinciphisa ezi ndleko ukuba unezakhono kunye nezinto onazo ukuze uzonakalise ngokwakho iinkuni.
Ngokubhekisele kubuhle, ukhuni lubonelela ngeendlela ezininzi zokukhetha umbono. Umthi unokuhluka ngemibala eyahlukeneyo ukusuka kwibala elimhlophe kunye nelikhanyayo ukuya kwimibala enzulu. Oku kuyinyani ngokukodwa kwimithi ethatha ukubala kakuhle njengecherry kunye ne-oki. Unokupeyinta iinkuni zakho ukuze ufumane inkangeleko eyahlukileyo - siza kungena kwindlela yokwenza oko kamva. Unokufumana imbonakalo eyahlukeneyo ngokukhetha iinkozo ezahlukeneyo. Ukuba awunguye othanda iinkozo zomthi, iintlobo ezininzi zeenkuni kulula ukuzifihla, kwakhona, ngepeyinti okanye amabala.
Umhla wexesha lomtshato template esimahla
Ukupeyinta i-wainscoting kunokuba phantse nawuphi na umbala onokucinga ukuba umhlophe uqhelekile. Olunye ukhetho lweklasikhi yokuhombisa mnyama yimithunzi engwevu. Ukupeyinta i-wainscoting kunokuba ngaphezulu kombala omnye. Akunqabile ukuba i-wainscoting isebenzisa iperi yemibala nokuba. Oku kusetyenziswa kakhulu ngeepaneli eziphakanyisiweyo zewinscoting kunye noyilo oluphakanyisiweyo olupeyintiweyo olumhlophe kwaye indawo igungxulwe eludongeni ehambelana nombala wodonga.
Kukho umahluko okhoyo kwiindleko zokupeyinta ukuhonjiswa. Ukuthenga i-wainscoting eyenzelwe kuphela ukuba upeyinte, mhlawumbi izakuba malunga ne-7 ukuya kwi-11 yeedola ngenyawo ngalinye lesikwere. Iipaneli zepeyinti efektri zibiza kakhulu kwi- $ 15 ukuya kwi-18 yeenyawo zenyawo nganye.
Iipaneli zokucoca i-PVC zihlala zisetyenziswa ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela. Ilawula ukufuma kakuhle kwaye kulula ukusula nakuphi na ukuchitheka okanye ukutshiza ngaphandle kwamabala okusisigxina. Banokumelana nomlilo, ke ngoko bongeza ukhuseleko oluncinci ekhayeni lakho. Xa kuziwa kwiindleko, iipaneli zodonga lwePVC kulula ukuzifaka kwaye zinokubiza ixabiso eliphantsi njenge- $ 1 ukuya kwi- $ 4 ngonyawo wesikwere. Olona tshaba luphambili lweepaneli zePVC kukuba ayingowona khetho ulunge ngakumbi kwindalo esingqongileyo.
Ukuvavanywa kweVinyl yenye yeendlela ezinokufikeleleka onokuzenza kuba imalunga ne- $ 4 ukuya kwi-7 yeedola kwisikwere sonyawo ngokomndilili. Nokuba kungcono, yenye yezona ndlela zilula onokuzifaka ngokunjalo. Ke, ukuba uqesha umntu wofakelo, awuyi kuhlawula imali eninzi ngomsebenzi.
IVinyl ikwindawo egudileyo, ecocekileyo kwaye ime kakuhle kwindawo emanzi nefumileyo. Kungenxa yoko le nto uninzi lwabanini bamakhaya lukhetha ukubekwa kwewayini ye-vinyl kumagumbi okuhlambela. Nangona kunjalo, i-vinyl ithambekele ekuqhekekeni kunezinye izinto. Abanye abaninimzi abayithandi into abahlala bebhekisa kuyo njengembonakalo engeyiyo ye-vinyl ngaphezulu kokukhetha okomthi.
UDanica patrick aaron rodgers utshatile
Ukucocwa kwethayile, njengokuthambisa iithayile, lolunye ukhetho olufanelekileyo kumagumbi okuhlambela okanye kwiindawo ezibonakaliswe kukufuma. Njengomthi, kukho iintlobo ezimbalwa zethayile onokukhetha kuzo eziya kwahluka ngokwexabiso. Kwiindleko zokugqibela ezisezantsi, ukhetho olunjenge-linoleum, i-laminate, kunye ne-vinyl ziya kuqhuba i-avareji ye- $ 2 ukuya kwi-7 yeedola. Izinto zakudala ezifana ne-porcelain kunye ne-ceramic zijikeleze i-5 ukuya kwi-10 yeedola ngonyawo wesikwere.
Esi sisixhobo ekulula ukusigcina nangona kuya kufuneka uqiniseke ngokugcina imigca ye-grout icocekile ukuze ibonakale kakuhle. Akubugcini ubushushu kakuhle kodwa oku akunangxaki ngokufotwa kweewins xa kuthelekiswa nomgangatho wethayile.
Ukucocwa kwentsimbi kunokuvakala kwindlela ebethiweyo kodwa kunokuba nomtsalane ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa ekhaya. Kwelinye, ingena kakuhle kuyilo lwangoku okanye oluncinci. Ikwahambelana kakuhle nezinto zendalo ezinje ngamatye okanye ukhuni, ezenza ukuba zibe ngumdla onomdla kuyilo lwe-rustic. Kuyomelela kwakhona, ngenxa yoko abaninzi basebenzisa ukubethelwa kwensimbi kungekuphela emakhaya kodwa nasezivenkileni, koovimba, kwiigaraji, nangaphandle.
Xa uyijonga njengokuphuma ngaphandle, nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba isinyithi siya kuba nomhlwa xa singakhathalelwanga kakuhle. Insimbi engenasici yintsimbi enganyangekiyo kumhlwa eyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokuyijonga.
Kuba isinyithi sinokugoba, yindlela elungileyo yokufumana ukubonakala okubhaliweyo. Ke, ukuba awuqinisekanga malunga nokuhluzwa kwentsimbi ethe tyaba, kuya kufuneka uthathele ingqalelo inkcenkce ngaphambi kokuba uyilahle imbono!
Izitayile zokucoca ulwelo zenziwe ngohlobo loyilo lwepaneli. Sele silujongile uhlobo lwezinto onokuzisebenzisa xa ucoca i-wainscoting yakho kodwa apha siza kujonga ubume okanye uyilo lweepaneli ngokwazo ezisoloko zisetyenziswa phantse naziphi na izinto. Oku kuya kuba yinto ekufuneka iqwalaselwe xa kuziwa kwiindleko.
Ukucacisa ngakumbi ezi zitayile, iikontraki, ezenziwayo, kunye nabaqulunqi bangaphakathi babhekisa kubo ngakumbi njengokubekwa eludongeni. Inye yezi paneli inenye yeendlela ezimbalwa zoyilo esiza kujonga kuzo ngezantsi. Xa ifakiwe, ezi paneli zenzelwe ukuba zibonakale zingenamthungo.
Iphaneli ephakanyisiweyo ye-wainscoting isitayile sendabuko esetyenziswa ngabantu abaninzi ukunika igumbi ukubukeka okuhle okanye okusesikweni. Isitayile sifumana igama laso ekubeni singakhuliswanga ngokupheleleyo kodwa endaweni yoko sisebenzise uyilo oluphakanyisiweyo. Eyona patheni ixhaphakileyo iphakanyisiwe izikwere embindini wepaneli nganye. Le ndlela ikwaphakamisa iileyili eziphezulu nezisezantsi. Ezi zitayile azoluli ziye kubude obungaqhelekanga kodwa endaweni yoko zinembonakalo yokubumba. Oku kunokuba yinto enye, umgca olula wokubumba okanye isahlulo esiphakanyisiweyo.
Ngelixa izakhelo eziphakanyisiweyo zezona zitayile zixhaphakileyo, abaninimzi banokusebenzisa nakuphi na uyilo abanokucinga ngalo. Ngokumalunga neendleko, iphaneli ephakanyisiweyo yeendleko zokurhola malunga ne- $ 10 ukuya kwi-30 yeedola ngonyawo wesikwere.
Iphaneli yokufaka iflat Flat iphakathi kokukhetha ikhefu kunye nokuphakamisa. Uyilo lwezi zinto kunokuba lula kwaye alusebenzisi ukubumba okuhombisa. Ikwayindlela efakwe kolunye uyilo olufana nesitayile seShaker. Iphaneli esembindini icaba-kungoko igama. Kuyinto efanelekileyo kumagumbi otshintsho kwaye inika igumbi imvakalelo yesiko. Oku kuhamba naphi na ukusuka kwi- $ 7 ukuya kwi- $ 20 ngonyawo wesikwere.
Iphaneli evalelweyo yokuvavanywa, njengoko unokuthelekelela, yeyona nto ichasene ngqo nokuphakanyiswa kwephaneli. Endaweni yokusebenzisa iimilo eziphakanyisiweyo njengomhombiso, ezi zoyilo zibuyela umva- okanye ziphinde zarhoxa- eludongeni. Ukwenza oku kujongeka, iipaneli zokucoca ulwelo ngokwazo zihlala zenziwe zincinci kwaye zithe kratya kancinci ngendlela efanayo neepaneli eziphakanyisiweyo kuyilo lwabo oluphakanyisiweyo. Uyilo lwepaneli ebuyisiweyo yenziwa njenge-indent, ihlala ijongeka ngathi ingene ngaphakathi okanye ijongeke ngokungathi uyilo ludonga eludongeni.
Sitshilo ngaphambili ukuba ibhadibhodi yahlukile kwezobuchwephesha ngaphandle kokucoca nangona amagama ahlala esetyenziswa endaweni yomnye nomnye. Okokuqala, makhe sijonge kwipateni. Ibhodi yebhodi ineepaneli zokuma nkqo ecaleni. Phezulu nasezantsi kwepaneli, iileyili eziphezulu kunye nezantsi zisetyenziselwa ukunika uyilo ukuziva okupheleleyo.
Inqaku elenza ukuba ibhodi yebhodibhodi ibe ngumqolo omncinci- okanye ubhontshisi - ohleli phakathi kwepaneli nganye. Ezi azinyani njengeepaneli eziphambili, nangona kunjalo. Zisebenza ngakumbi njengolwandlalo phakathi kweepaneli kwaye zijongeka ngathi ngumtya omxinwa phakathi kwepaneli nganye.
I-Beadboard ikwakhona ukuba ifakwe kwi-taller okanye, ngaphantsi rhoqo, ukuphakama okuphantsi kunokuba kuchazwe ngokuchanekileyo. Ngokwesiko, ibhodi yebhodi yenziwe ngomthi kodwa kwimbali yakutshanje, ixutywe ukuba ibandakanye izinto ezifikelelekayo okanye ezomeleleyo ngakumbi.
Ibhodi kunye ne-batten wainscoting lukhetho oluthandwayo phakathi kwamakhaya ane-rustic yoyilo ngakumbi. Oku, ubukhulu becala, ngenxa yemigca yayo ecocekileyo nelula. Ezi paneli zibiza ixabiso eliphantsi neenkampani ezininzi eziqikelela nokuba iiphaneli zodonga olupheleleyo zincinci nje nge- $ 11 ngenyawo lesikwere.
Lo ngumbono ofana kakhulu nokubhabha eludongeni okuphelisiweyo kodwa ipateni ngokwayo yahlukile. Endaweni yokupheliswa ekubunjweni okanye ekuphelisweni kuphela kwimilo ethile, ibhodi kunye ne-batten wainscoting iye yaphosa isikwere okanye ii-rectangles ezithatha phantse yonke ipaneli. Emazantsi emiphetho, kukho itrimu ephakanyiswe kancinci kodwa ayisiyonto ingqongqo njengokubumba okusetyenziswa kwezinye iindlela ezininzi.
Usihlalo woololiwe wokucoca ulwelo kwiipaneli eziphezulu zokukhumbuza umzila wesitimela. Ihlala ibonakala njenge-trim yokubumba kwisitulo sikaloliwe okanye ukuphakama kwewinscoting. Olu hlobo luhlala lufakelwa ngeenxa zonke ezingama-32 ukuya kuma-36 ukusuka phantsi. Ihlala inesitimela esisezantsi esilula kwaye esingaphantsi kunesiporo esiphezulu. Kuba akukho zinto zimbalwa, isitulo sokuthuka asibizi nge-avareji ye- $ 1 ukuya kwi-3 yeedola ngenyawo elilinganayo.
Ukujongwa okufutshane kwesitulo sikaloliwe sokuwola epasejini.
Ukuhanjiswa kwe-Shiplap wainscling yahlukile kwinto yokuba uyilo lwayo luhlala luthe tyaba kunokuba lube nkqo. Ngelixa i-shiplap inokuba noyilo oluqhelekileyo ngokuthe nkqo ecaleni, ihlala ihlukaniswa njenge-slats ngaphezulu komnye ngokuthe nkqo.
Uyilo olwenziweyo lwenza kakuhle ekwenzeni igumbi libukeke likhulu ngelixa uninzi lucinga ukuba uyilo oluthe tyaba lusebenza kakuhle ekunikezeleni igumbi umkhombandlela. Yiyo loo nto ihlala isetyenziselwa ukukhokelela kwizinyuko okanye ekungeneni kwekhaya. Olu hlobo lubiza malunga ne- $ 2.50 ukuya kwi-7 yeedola. Bona Okuninzi igumbi lokuhlambela elihamba ngenqanawa Apha.
I-rustic imibono yokurhola
U-Shaker wainscoting ufana ngokungafaniyo nebhodi kunye ne-batten wainscoting kwaye, ngenxa yokufana koyilo, ziqhutywa ngexabiso elifanayo. Isebenzisa ukujongwa kokucinywa kwaye ihlala ifakwa ngokongeza ukhuni kunye nokubumba eludongeni endaweni yokongeza iipaneli ezigcweleyo. Esi sisimbo esihlala sithwalwa siye kungena nasemacaleni egumbini. Ezi zinokuba ngamacala oxande macala okanye amacangca amancinci afakwe ngokuthe nkqo.
Ngokujonga okufanayo kwibhodi kunye nesitayile se-batten, ifreyimu yomfanekiso oqingqiweyo uhlala usetyenziselwa iiprojekthi ze-DIY ukwenza inkangeleko kunye nexabiso elingabizi. Ngokongeza iziqwengana ezincinane zomthi ezimile kwisakhelo somfanekiso umntu angenza olu hlobo loyilo olunamava amancinci okwakha. Uya kuqala ngokuhlanganisa isakhelo somfanekiso ngokobungakanani obufunayo uze emva koko uyiqhoboshele kwi-1/4 ″ eludongeni usebenzisa iglu kunye nokugqiba iinzipho. Emva kokuqhotyoshelweyo unokuyipenda indawo ukuze utshatise enye into yokunxiba kunye nokubumba kwigumbi ukwenza uyilo lwangaphakathi oluhambelanayo.
Ukucocwa kweethoni ezimbini kuhlala kusetyenziswa isitayile somfanekiso wesakhelo kunye nodonga lombala wepeyinti ngombala we-trim ukufezekisa inkangeleko oyifunayo. Ukuba uyila le ndlela isuka ekhaya ingumbono olungileyo wokupeyinta i-trim ngaphambi kokuyincamathisela kwipaneli yokugcina ixesha namandla.
Ungathenga i-wainscoting epeyintiweyo okanye ebunjiweyo, nangona kunjalo uninzi lukhetha ipeyinti kunye ne-primer kwenye. Uninzi lwe-wainscoting isebenzisa umzobo ophakamileyo ophakamileyo, ke yonke ipeyinti inye inokuba sisindisi esikhulu sexesha. Uyakufuna kwakhona itheyiphu yokupeyinta ukugcina imigca icocekile. Ibrashi ye-angled iluncedo ekujonganeni nemimango kuyilo. Sigubungela ukupeyinta ngokweenkcukacha kamva kweli nqaku.
Ngoku ukuba uyazi izitayile kunye nezinto onokukhetha kuzo nge-wainscoting, makhe sijonge olo lwazi lusebenzayo kwaye siqwalasele imibono ethile yoyilo egumbini.
Sebenzisa i-wainscoting kwigumbi lokuhlambela yindlela elungileyo yokwenza isitayile esimanyanisayo. Sisitayile esithandwa ngabantu abaninzi kuba sinokutshatisa igumbi lokuhlambela elinendawo yokuma yasimahla kodwa inokuba nomtsalane nakweyiphi na indlu yangasese. Uya kufuna ukukhetha izinto ezinokuma kakuhle emanzini, nangona kunjalo, okanye usenokuba nobunzima ngokuphila ixesha elide.
Xa usebenzisa i-wainscoting ukwenza igumbi lomgubo libukeke likhulu kwaye linomtsalane, kukho iingcebiso ezimbalwa zokugcina engqondweni. Ngenye, ungahambi nayo nayiphi na into ende kwaye emnyama - ngakumbi udonga olupheleleyo olujikeleza imibala emnyama. Uyakwazi ukubonakala uvula igumbi ngokusebenzisa imibala elula kwaye uthelekisa nolunye udonga. Bona Okuninzi izimvo zangasese Apha.
Ukucoca amanzi kwigumbi lokutyela kunokongeza ukubamba okuhle kwaye yindlela entle yokufomatha itafile enkulu yegumbi lokutyela. Unenkululeko enkulu kunye nesitayile sokwenza i-wainscoting apha. Ukuphakama okusemgangathweni kunye nokuphakama kwamagxa okusebenza kakuhle. Ukugqitywa kweenkuni ezimhlophe okanye ezimhlophe ziphakathi kwezinto ezikhethwa kakhulu.
Sele sixoxile ukuba i-PVC okanye i-vinyl wainscotting kulula ukuyicoca. Ngenxa yeli lungelo lokukwazi ukumelana nobumdaka ngaphandle kokudyobha, oku kunokubenza bagqibelele ekhitshini. Ngokukodwa, ukuhanjiswa kweekhitshi ekhitshini kunokusebenza kakuhle ecaleni kwendawo yokutyela kwaye banokwenza i-backsplash enkulu.
Udonga olungenanto ngokuchasene nekhawuntara okanye ngasemva kwesitovu ayisiyonto inkoliso yabaninimzi abathandana nayo. Kungenxa yoko le nto abaninzi bekhetha ukubuyela umva. Kukho izinto ezininzi onokukhetha kuzo xa kufikwa kumqolo wokubuyela umva kwaye ukongeza i-wainscoting kunokuba yindlela yokongeza ubume ekhitshini lakho kwaye uqhagamshele ukubuyela umva kwakho kuyo yonke eminye imihombiso yasekhitshini. Ukujikeleza indawo yokubaleka engena kwindawo esemgangathweni yodonga, ukuvavanywa okude kungasetyenziswa.
Amagumbi okuhlala anokusebenza okuninzi xa kufikwa kumba wokudubula. Olunye ukhetho, njengamanye amagumbi asendlwini, kukusebenzisa ukuphakama kokuphakama okuqhelekileyo kwaye uvumele umbala udibane kwizakhelo zomnyango. Nangona kunjalo, unokufumana ukujonga okuhle ngokudlala ngemibala okanye ubude. Kuba amagumbi okuhlala yenye yezona ndawo zixineneyo zezithuthi ekhayeni, ungasebenzisa i-wainscoting ukugubungela nawuphi na umonakalo okhoyo, ukukhusela iindonga, kunye nokongeza indawo yokuhombisa. Kwamagumbi okuhlala ngokukodwa, ukubekwa kwewins kudla ngokusetyenziswa ukuthelekisa uyilo lokubumba kwindibaniselwano yodonga nophahla.
Ukujonga indawo yakho epasejini kunezibonelelo ezininzi ezifanayo zokusebenzisa i-wainscoting kwigumbi lakho lokuhlala. Emva kwayo yonke loo nto, ipaseji yakho ifumana phantse ukugcwala njengegumbi lakho lokuhlala. Ukongeza, ukuhanjiswa kwe-wainsc ukubolekisa ekuhambeni kwepaseji kwaye kuyenze ibonakale inde kwaye inkulu. Inokunceda nabanini bamakhaya badlale ngemibala yepeyinti ngendlela eyakhiwe ngayo ukuba abaqinisekanga ngendlela yokujongana nemibala yepeyinti eludongeni olungenanto.
Ukuvavanywa kwamanzi kunokuba yindlela elungileyo yokukhokelela kwizitepsi kwaye, kwakhona, yongeza umnqweno omnandi kwizitepsi zakho. Rhoqo, oku kukuphakama okusemgangathweni. Ngale ndlela, imizila kaloliwe ephezulu inyuswe ngodonga ukuba izinyuko inayo. Nokuba ayenzi njalo, ukulinganiswa kwe-wins kulinganiswa kulungelelaniswa nokuma okumileyo kwelinye icala lezinyuko.
Kukwakho nenkxalabo yokujongwa kwamehlo eludongeni okuhamba ngaphantsi kwezinyuko. Oku kunokuba zizinyuko ezizeleyo zodonga okanye izitepsi eziphakamileyo. Nokuba yeyiphi na indlela, lo msebenzi uhlala ubiza ubuncinci ukusikwa ngokukodwa ukuhlawulwa kodonga olucothayo.
Xa sicinga nge-wainscoting, sihlala sicinga ngoyilo lwasekhaya lwasekhaya. Nangona kunjalo, zininzi iindlela zokuphucula olu phawu loyilo ukuqinisekisa ukubonakala kohlobo oluthile. Eyona ndlela yokwenza oku kukusetyenziswa kwebhokisi yoyilo. Umzekelo, endaweni yepaneli ephakanyisiweyo yesikwere, unokuzama iipateni ezijikelezayo okanye imibala engaphandle kwebhokisi yoyilo. Iindonga ezigxininisa ukondla i-Wainscoting nazo zinomdla. Kwangokunjalo, i-wainscoting ende enombala ongqindilili eludongeni ngaphezulu inokongeza ubumnandi, ukujija kwale mihla-ngakumbi kwigumbi lomntwana!
Indawo yokungena yindawo yokuqala ababonayo xa bangena ekhayeni lakho. Ukucocwa kwalamaxesha kuyilo loyilo lwejometri kunokwenza umbono wokuqala omkhulu ubhangqwe kunye neziqwenga zefanitshala ezifanelekileyo kunye nokuhonjiswa.
Umzobi we-wainscoting siko elenziwe ngumsebenzi wobugcisa okanye, ukuba uluncedo, mhlawumbi nawe ngokwakho. Olu hlobo lokusasaza lwenziwa ngokuthenga iodolo yeepaneli. Endaweni yokuba izinto zisikiwe, zenziwe zaza zafakwa. Le yindlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba ukuntywila kumdlalo we-fins kulungelelene kakhulu nokwakhiwa kwekhaya lakho ingakumbi xa kufikwa kwii-engile ezingaqhelekanga ezifana nezitepsi okanye iisilingi ezijingayo.
Ukuba unegcisa lokudala ukugcotshwa ngesandla kwaye uyifaka ngokwesiko, ungothusi ukuba ugqiba ngendleko eziphezulu kunofakelo lwepaneli olulula.
Uyilo lweRustic luxhomekeke kakhulu kubuhle bendalo kunye nezinto ezinobunzima. Ngenxa yobumbano lwayo kwizinto zomhlaba kunye nokuthungwa kwezinto eziphilayo, ukugqitywa kweenkuni kuyona khetho lukhethwa kakhulu. Ngaphandle kwendlela enye, zininzi izinto onokukhetha kuzo ezinokukwenza uyilo lwakho lwe-rustic. Sele sigubungele ukuba zininzi iintlobo zeenkuni ezisetyenziswayo xa kucocwa ibhola. Ngokongezwa kwebala, kukho ithuba elingenamda lokwenza ngokwezifiso. Ukunyaniseka ngokwenyani kuyilo lwe-rustic, yiya kwimithi engenanto oyithandayo kwaye uvumele ingqolowa ibe yeyona ndawo kugxilwe kuyo.
Ukuqotywa kweenkuni zokhuni kuyahambelana nokuyilwa kwe-rustic kodwa kodwa inokunika naliphi na ikhaya isiko lesiqhelo. Unokubona kwakhona le ndlela ekubhekiswa kuyo njengokuphinda kwenziwe iplanga. Esi sihloko sichaza ukuba loluphi uhlobo ngokugqibeleleyo. Endaweni yoku-odola esandula ukusikwa, umthi ofanayo wokukroba, le yingcinga yokuphindaphinda iinkuni ezindala.
Oku kunokusebenza kakuhle kuyilo lwe-rustic ngenxa yezizathu ezimbalwa. Okokuqala, iziqwenga ezingahambelani kakuhle ziyinika ezantsi komhlaba. Ngaphezulu kwento leyo, lukhetho oluhlaza olungabuthi kuphela ubuhle bendalo kodwa luyabukhusela nalo.
Isitayile seArt Deco sivela eFrance ekuqaleni kweminyaka yoo-1920 kwaye siqwalaselwa ngabaninzi ukuqala kwentshukumo yanamhlanje. Ezinye zeempawu zokuma kwesi sitayile ziimo ezihlengahlengisiweyo, uyilo lwejometri kunye nokuhonjiswa komphezulu.
Okwangoku, sithethile ngezinto ezininzi zokucoca i-wainscoting kwaye sade sachaphazela ukupeyinta i-wainscoting. Kunokuba nzima ukukhetha umbala kodwa ongade ungawuthatheli ngqalelo ukubonwa komnyama.
Sixoxe ngokutsalwa kwangoku kwangoko kwaye oku kunokuba yindlela elungileyo yokufumana le vibe. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ngelixa abamnyama banokunika inkangeleko entle, inokwenza igumbi libukeke lincinci. Oku kuthetha ukuba udonga olupheleleyo lwe-wainscoting isenokungabi luyilo oluthile kunye nesikimu sombala kumagumbi amancinci.
Ngelixa ukucoca i-wains kudla ngokusetyenziswa kuyilo lwangaphakathi, ikwayindlela enomdla yokongeza kuyilo lwangaphandle. Amaxesha amaninzi, ikho njengenxalenye yesakhiwo. Umzekelo, indlu inokuba nezitena okanye ibhlokhi ebhlokhi erhangqe ezantsi kwendlu. Uyilo lwezitena zithandwa kakhulu kwisibheno sabo sobuhle. Izitena zihlala zomelele, ngenxa yoko igcina izinto kakuhle.
Ngokwembonakalo ye-rustic ngakumbi, ukujongwa kwesinyithi kuyathandwa. Phantse lonke ukhetho lwangaphandle lwe-wainscoting lusebenzisa ukucaca okucacileyo okuphezulu ukunceda ukwenza utshintsho olunomtsalane phakathi kokucotywa kunye nokujongwa. Ukuqhawulwa kwe-wains-uphahla ngamanye amaxesha kunxulunyaniswa namakhaya aphezulu asebenzisa amatye angaqhelekanga.
Sixoxe ngaphambilana ukuba ukubekwa kwe-wainscoting kunokuphakama ngokubanzi. Siphinde saxoxa ukuba obu bude bunokutshintshelwa kwinkangeleko eyodwa. Enye indlela enokutshintsha ngayo kukusebenzisa ukugcotshwa okupheleleyo komgangatho ukuya phezulu. Ngokwesiqhelo, udonga olupheleleyo lodonga ekubhekiswa kulo lubizwa ngokuba yipaneli yokubumba okanye udonga nje lodonga. Njengomthetho wobhontsi wokuwucofa ufikelela kuma-32 ″ ngaphezulu komgangatho.
Indlela enomtsalane yokusebenzisa udonga olupheleleyo lokulinganisa kukudala udonga olunombala oqaqambileyo ukongeza ukubamba okumangalisayo kwigumbi. Kwakhona, inokusetyenziselwa ukubamba okumangalisayo kwiipaseji ezinde okanye ezimxinwa. Ewe, akuvakalanga ukuba ukugcotshwa kodonga olupheleleyo kusetyenziswe kuzo zonke iindonga zegumbi lokubonakala kwasebukhosini.
Kwinqaku elifanayo, ubude obude be-wainscoting budlulela phezulu ngokuthe nkqo kunobude obuqhelekileyo. Ngokwesiqhelo, ifakwe kubude obuqhelekileyo begxalaba. Kukho iindlela ezimbalwa zokwenza olona loyilo. Ukhetho lwakudala kukusebenzisa uyilo oluhlelweyo loxande kunye noyilo oluyekisiweyo lwesikwere ukuphakama okungaphezulu.
Umbono onomdla wokujonga ixesha elide kukusebenzisa ukubumba okwandisiweyo kuloliwe ophezulu ukwenza ishelfu. Le ndlela ikwayindlela entle yokubeka igumbi elinendawo enkulu yomlilo okanye eziko. Ngokungafaniyo nodonga olupheleleyo lodonga, ukuvotelwa okude kusoloko kusetyenziswa kwigumbi lonke.
Ukuba uhlala kwiiprojekthi zasekhaya ze-DIY, uya kuvuya xa usiva ukuba i-wainscoting yiprojekthi onokuyenza ngezixhobo ezifanelekileyo kunye nexesha. Apha, siza kujonga ezinye iziseko zale projekthi.
Ukuba umtsha okanye unovalo ngokwakha i-wainscoting ukusuka emhlabeni ukuya phezulu, ikiti yokuphelisa inokuba ngumhlaba ophakathi ogqibeleleyo.
Ezi khithi ziza neepaneli ezisikwe kwangaphambili okanye, ukuba uthenga iinkuni, zinokugqitywa kwangaphambili. Le ikwayindlela entle yokukhawulezisa inkqubo ye-wainscoting DIY ngelixa ugcina iindleko zokufaka.
Umzekelo wekhithi yokucoca i-wainscoting yile Nordic knotty pine kit egubungela i-24 yomgama weenyawo zodonga ngesihlalo sokubumbela.
(Jonga le khithi yokuphonononga iipayini apha IAmazon )
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa ufaka eyakho i-wainscoting kukucoca iindonga. Ukuba kukho nayiphi na imingxunya eludongeni, sebenzisa i-drywall filler ukuyifaka kunye nesanti xa uyomile. Qiniseka ukuba ulinganisa kwaye uphawule iindonga ukuze uqiniseke ukuba i-paneling iya apho ufuna khona. Sebenzisa inqanaba ukuze ukhuseleke.
Inkulumbuso eludongeni kuloo ndawo uyilwayo. Emva koko, qala ngokufaka iileyili eziphezulu nezisezantsi. Emva koko, uza kuqala kuyilo ngokwalo eliguqukayo. Oku kungabandakanya ukongeza ukubumba kwiphaneli ephakanyisiweyo yokuphamba okanye ukuphakamisa izakhelo ukufaka ikhefu okanye ibhodi kunye nezitayile zebatten.
Iglu lukhetho oluqhelekileyo lofakelo kuba alunambonakalo wangaphandle kunye ne-caulk inokukunceda ugcwalise naziphi na izithuba.
Ndifanele ndichithe malini kwisipho somtshato
Xa kuziwa kwi-wainscoting kukho iingcebiso kunye namacebo ambalwa anceda ukwenza nayiphi na iprojekthi yokupeyinta iphumelele, kunye nezinye ezimbalwa zokunceda nge-aesthetics. Akukho zinto zininzi kakhulu ziyafuneka ukupeyinta i-wainscoting, iimveliso ezifanayo ozisebenzisayo xa upeyinta enye into.
Ipeyinti, i-primer, itapeyinti yokupeyinta, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kunye ne-ANGLED brush - ndithembe kule yokugqibela izakufika iluncedo- kunye nalo naliphi na elinye ilaphu lokulahla, iitawuli, izileyi, njlnjl. usondele.
Ukuqala kukukhetha umbala kunye neepateni zokucandwa. Ngokwesiko emhlophe isetyenziselwa ukubumba kunye nokucheba, kodwa kutheni le nto kufuneka sinamathele kwimveli? Eli lithuba elihle lokongeza i-aksenti kunye nesinongo sokwenene kwesi sithuba, okanye uzise ubukhulu obungaphezulu kwisithuba esinegrey okanye i-beige. Amathuba makhulu njengoko ucinga ngokuthatha kwakho. Ayisiyi kuphela ukongeza imibala kwindawo esezantsi eludongeni eya kuba nakho ukulungelelanisa kunye nayo yonke eminye imibala yodonga kunye nophahla, kodwa iya kuba nokuxolela ngakumbi kwi-bangs kunye ne-bumps esezantsi sodonga ngokuqinisekileyo kuya kufumana.
Ngamanye amaxesha ukubekwa kweliso eludongeni lonke, okunika ithuba elingcono lokuzisa ubungakanani kwisithuba ngezibane kunye nobumnyama bemibala efanayo. Kuxhomekeka ekubeni yeyiphi indlela yokukhethwa kwe-wainscoting ekhethiweyo kunceda ekuboneni ukuba yeyiphi imibala efanelekileyo kunye nokuba mingaphi imibala eyahlukeneyo enokuthi ikhethwe.
Ngoku ukuba umbala ukhethiwe, ixesha lokuqala umzobo, akunjalo? Bamba amahashe akho, kuqala kufuneka silungiselele. Kubaluleke kakhulu ukuba usebenzise itheyiphu yokupeyinta ukwahlula udonga olupeyintwe ngokucocekileyo kwindawo epeyintiweyo yangoku. Kangangokuba ucinga ukuba ungapenda umgca othe tye, sebenzisa itape, iya kuba kufanelekile. Oku kunokuba luncedo ekwenzeni naluphi na uyilo olongezelelekileyo okanye ukwahlula imibala emininzi ukuba yile nto isetyenziswayo kwiindawo ezahlukeneyo zokuhluzwa.
Ixesha lokupeyinta! Ngokwesiqhelo ukubekwa emnxebeni kukwi-gloss paint, oko kuthetha ukuba uyayipeyinta kwakhona kunzima ngakumbi ukuyigubungela. Endaweni yesanti okanye ukrwela, fumana i-primer, okanye ngcono kodwa ibe-2 kwipeyinti e-1 kunye ne-primer. Oku kuthatha ingubo okanye ezimbini kuxhomekeke kwinqanaba lepeyinti yangaphambili.
Ukuba i-2 kwi-1 yepeyinti kunye ne-primer ilahlekile kwezinye iindawo, ukuthatha ingubo eyongezelelweyo ye-primer kufuneka ifumane inqanaba elifanelekileyo lokubambelela. Ngelixa ukupeyinta i-wainscoting kuyanceda ukusebenza kumacandelo, ngakumbi kugxile kumacandelo athe tye kwaye athe nkqo ngokwahlukeneyo ukuze ufumane imivumbo echanekileyo yebrashi. Kulapho ibrashi ye-angled ingena khona ngokufanelekileyo, kuninzi lwezicelo zokucoca ulwelo zininzi izinto ezinokubakho kunye nokuthunga, kulapho ibrashi ye-angled iya kuthi inike elona thuba lifanelekileyo lokufikelela. Qinisekisa ukuba yonke imivimbo yebrashi iya kwicala elifanelekileyo ukuze ufumane umsebenzi wobugcisa, owenziwe kakuhle wepeyinti.
izipho zabafundi emtshatweni
kutheni ukuthandana online akusebenzi
Yintoni onokuyifumana kwisithandwa sakho kwisikhumbuzo sakho
iwasha kunye nobukhulu bokomisa
unyana nomama imidaniso yomtshato
iringi yomtshato yesilic ivenkile